५३ गुणा बढी आवेदन परेको उन्नतिको आईपीओ ६ प्रतिशतले मात्र पाउने, क–कस्ले पाउछन त? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बिश्लेष्ण > ५३ गुणा बढी आवेदन परेको उन्नतिको आईपीओ ६ प्रतिशतले मात्र पाउने, क–कस्ले पाउछन त?
५३ गुणा बढी आवेदन परेको उन्नतिको आईपीओ ६ प्रतिशतले मात्र पाउने, क–कस्ले पाउछन त?
काठमाडौ । उन्नति माइक्रोफाइनान्सको साधारण सेयर अधिकतम आवेदकले नपाउने भएका छन् । सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत कारोबार गरिएको लघुवित्तको साधारण सेयर पुस २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म खुला भएको थियो ।
जसमा दुई लाख ४८ हजार आवेदकले ७९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क क्यापिटलबाट प्राप्त भएको छ । आवेदक संख्या अत्याधिक बढेपछि ६ प्रतिशत आवेदकले मात्र सेयर पाउने प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा देखिएको हो ।
लघुवित्तको आईपीओ १५ हजार १५ जनाले पनि गोलाप्रथाबाट १० कित्ता सेयर पाउनेछन् । बाँकी दुई लाख ३३ हजार जना आवेदकको हात भने खाली हुनेछ । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा जम्मा ६ प्रतिशतले मात्र सेयर प्राप्त गर्नेछन् । रकमका आधारमा परेको यो आवेदन माग भन्दा ५३.११ गुणा बढी हो ।
गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ६९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको उन्नतिले चालू आवको प्रथम त्रैमासमा ४५ लाख १० हजार खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बार्षिक ४४ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ ।
उन्नतिले एक लाख ६५ हजार कित्ता आइपीओ निष्काशन गरेको सेयरमध्ये चार प्रतिशत (६ हजार ६०० कित्ता) सेयर कर्मचारी र पाँच प्रतिशत (८ हजार २५० कित्ता) सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ । बाँकी एक लाख लाख ५० हजार १५० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड हुनेछ ।
रुपन्देहीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको माइक्रोफाइनान्सले लुम्बिनी अञ्चलका पाँच जिल्ला रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसहित प्युठान, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत लगायत १० जिल्लाका २७ शाखा कार्यालय मार्फत सेवा प्रदान गर्दे आएको छ ।
२०७४ पौष २६ गते १९:५४ मा प्रकाशित
जापानमा मृत्यु भएका रमेशको परिवारलाई तामाङ समाज जापानबाट आर्थिक सहयोग
बैदेशिक रोजगारिको बाहानामा अन्दाजी ३ करोड नेपाली रुपैयाँ ठगि गर्ने दुई जना पक्राउ